Tsy mbola fantatra ny hialany ao amin’ny HJRA : efa miandry an-dRazaimamonjy Claudine indray ny Bianco | NewsMada
Tsy mbola fantatra ny hialany ao amin’ny HJRA : efa miandry an-dRazaimamonjy Claudine indray ny Bianco
Tsy mbola fantatra na haharitra hatramin’ny rahoviana. “Efa eto amin’ny HJRA izao Razaimamonjy Claudine. Tohizanay ny fitsaboana. Tsy azo resahina fa tsiambaratelo ny aretina mahazo azy… Arakaraka ny fivoaran’ny toe-pahasalamany no hivoahany eto…”, hoy ny lehiben’ny HJRA, ny Pr Rakoto Alisoa, omaly. Tokony hotanana am-ponja vonjimaika anefa ity tandapa ity raha ny tokony ho izy.
Etsy andaniny, mbola manana antontan-taratasy efatra hafa momba ity mpanolotsain’ny filoham-pirenena ity koa ny eo anivon’ny Bianco amin’izao fotoana izao. Tsy mbola voafaritra kosa anefa ny fotoana hiantsoana azy indray eny Ambohibao. “Miandry ny fahavitan’ny fitsaboan-tenany izahay sady fanajana ny zon’olombelona izany. Hotohizana indray ny fihainoana azy amin’ireo raharaha hafa rehefa milaza ny mpitsabo fa sitrana soaman-tsara izy”, hoy ny loharanom-baovao eny anivon’ny Bianco.
Nampirisihan’ny iraisam-pirenena ny Bianco sy ny SMM
Tsiahivina fa nosamborina tetsy Mahamasina ny 3 avrily teo Razaimamonjy Claudine. Natolotra ny fitsarana miady amin’ny kolikoly (CPAC) tetsy 67 ha rehefa nohenoin’ny Bianco nandritra ny efatra andro teny Ambohibao. Namoahana didy fidirana am-ponja vonjimaika avy eo nefa torana tampoka. Nalefa tetsy amin’ny HJRA taorian’izany. Nalefa notsaboina tatsy amin’ny Nosy Maorisy ny 10 avrily teo ary izao niverina eto an-tanindrazana izao indray. Teo anelanelan’izany, nahazo laka ny fanehoan-kevitra samihafa toy ny fitakina ny hitsarana sy ny hanohizana ny raharaha momba ity mpandraharaha akaiky ny mpitondra ity. Eo koa ny tsindry ankolaka sy mivantana avy amin’ny sehatra iraisam-pirenena amin’ny fampirisihana ny Bianco sy ny Sendikàn’ny mpitsara (SMM) hanohy ny asany hatramin’ny farany.